ညီလင်းသစ်: March 2012
ကျနော်တို့ရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်က ဒီလိုပါ၊ ရန်ကုန်မှာ တစ်ပတ်နေမယ်၊ ပြီးရင် ပုဂံကို သွားမယ်၊ ပြီးရင် ရန်ကုန်ကိုပဲ ပြန်လာပြီး ပြန်တဲ့အထိ နေမယ်၊ ဒါပါပဲ..၊ မြန်မာပြည်ကို တစ်လနီးပါး သွားပြီးတော့ ရန်ကုန်နဲ့ ပုဂံ နှစ်ခုထဲ လည်ခဲ့ရသလားလို့ နှမြောစိတ်နဲ့ တွေးမယ်ဆိုရင် တွေးလို့ ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီခရီးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ် ချက်က မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဖို့က အဓိကဖြစ်လို့ ဒီလိုပဲ စီစဉ်လိုက်တာပါ၊ မဟုတ်ရင် ကျနော်တို့ပါ တိုးရစ်စ်လုပ်ပြီး တပြည်လုံး ပတ်နေရင် နေသွားတာတော့ တစ်လနီးပါး ရှိပါရဲ့၊ ဘယ်သူနဲ့မှ ဟုတ်တိပတ်တိ တွေ့လိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ အများစုက ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲမှာ လုပ်ကြသူ၊ ဧည့်လမ်းညွှန် စတာတွေ များပါတယ်၊ ဒီအချိန် သူတို့အားလုံးက ဧည့်သည်ကျလို့ တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် ခရီးသွားနေတာကို ကိုယ်က ရန်ကုန်ကနေ ထိုင်စောင့်မှ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာပါ၊ နောက်ဆုံး တစ်ချက်ကတော့ ရေအင်မတန် ကြိုက်တဲ့ သားအတွက်ပါပဲ၊ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ဟာ သူဘာမှ မသိတဲ့၊ မခံစားတတ်တဲ့ အရာတွေ ကြားမှာပဲ ကုန်ဆုံးတာထက် သူ နှစ်သက်ရာ ရေကူးကန်လေးနဲ့ တွဲပြီး ဟန်ချက် ညီစေသင့်တယ် မဟုတ်လား...၊
ဒီလိုနဲ့ပဲ မနက်တိုင်း နီးပါး၊ တခါတလေ ညနေပိုင်းတွေပါ ရေကူး ဖြစ်တယ်၊ အင်းယားလိတ်ကို ရွေးတဲ့ အချက်တစ်ခုကလည်း ရေကူးကန် ကြောင့်ပါပဲ၊ ကျနော် သိသလောက် လောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာ ကလေးရေကူးကန် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ရှိတဲ့ ဟိုတယ်က အင်းယားလိတ် တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်၊
အဲဒီမှာ မနက်တိုင်း ရေကူး လာ,လာသင်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ သားနဲ့ အဖော်ရ သွားတယ်၊ ကလေးချင်း ဆိုတော့ ချက်ချင်း ရင်းနှီးသွား ကြတယ်၊ စကားတွေ အများကြီး ပြောစရာ မလိုဘဲ တစ်ယောက်က ဘယ်လို ကစားချင်လဲ ဆိုတာ နောက်တစ်ယောက်က ခဏချင်းမှာ သဘော ပေါက်တယ်၊ အခုလို ကလေးချင်း ကစားတဲ့အခါ သားအတွက် မြန်မာ ဝေါဟာရ အသစ်တွေ ပိုတိုးပြီး မြန်မာလိုလည်း ပိုပြောလာတယ်၊ ဒီခရီးကနေ ကျနော် အလိုချင်ဆုံး အကျိုးအမြတ် ကလည်း အဲဒါပါပဲ..၊
ရွှေဂုံတိုင် မီးပွိုင့်...၊ ဒီမီးပွိုင့်ကို ဖြတ်တိုင်း အနည်းဆုံး ၂ ခါ ရပ်ရတယ်၊ ဘယ်အချိန် သွားသွား ယာဉ်ကြောက အမြဲပဲ ကြပ်နေလေ့ ရှိပါတယ်၊ ရန်ကုန်မှာက အခု ကားတွေ အရမ်းများလာတော့ ယာဉ်ကြောတွေက တမြို့လုံးလိုလို ကြပ်ပြီး ခပ်နှေးနှေးပဲ မောင်းနေကြ ရတယ်၊ အဆိုးဆုံး လမ်းဆုံ ၄ ခုဖြစ်တဲ့ ရွှေဂုံတိုင်၊ လှည်းတန်း၊ တာမွေနဲ့ ဘုရင့်နောင် တို့မှာ ဂုံးကျော်တံတား ထိုးဖို့ လုပ်နေပါပြီ၊ ကျနော်တို့ ရှိနေစဉ်မှာ ကိုပဲ ပန္နက်တွေ စ,ရိုက် နေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်၊
'ခိုင်ခိုင်ကျော်' ရဲ့ အခင်းအကျင်း...၊ ဘယ်ဆိုင်တွေမှာ သွားစားချင်လဲလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က မေးတော့ ကိုတီဇက်အေ ဘလော့ဂ်မှာ မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီနာမည်လေးက ခေါင်းထဲ ရောက်လာခဲ့တယ်၊ ဒါနဲ့ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းက ဆိုင်ကိုပဲ သွားဖြစ်ပါတယ်၊ ဟင်းအမယ် အတော်စုံတယ်၊ ဝန်ထမ်းအင်အား များလို့ ဝန်ဆောင်မှု မြန်တယ်၊ စားသုံးသူတွေလည်း အများကြီး ပါပဲ၊ မသိရင် အလှူများ ပေးနေသလားလို့ အောက်မေ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆိုင်နေရာ အထိုက်အလျောက် ကျယ်လို့ စားပွဲတွေ တော်တော်များများ ရှိတယ်၊ စားလို့ ကောင်းတယ်..၊
နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ခန့်ခန့်ကြီး ကူးတတ်တဲ့ အဲဒီကောင်ကို မစားရတာ ကြာပြီ...၊
တလားဗီးယား (ထင်တာပဲ..)၊ ငါးစားရင် ဥာဏ်ကောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် ဥာဏ်ကောင်းဖို့ စားခဲ့တဲ့ ငါးနာမည်ကို မမှတ်မိဘူး၊ ကဲ... ဖြစ်ပုံများ...၊း)
တဂ်ပို့စ်တွေမှာ အစားချင်ဆုံး ဟင်းတစ်ခွက်ဆိုပြီး ဘလော့ဂါတွေ တော်တော်များများက သူ့ကို သတိတရရှိ ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ့ကို တမ်းတသူတွေ များပေမယ့်လို့.. ကျနော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့တဲ့အခါ မာနကြီးပုံ မရပါဘူး၊ အခုလို ပိပိပြားပြားနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ် ပါပဲ၊ သြော်.. ချဉ်ပေါင်၊ ချဉ်ပေါင်...၊
သူ့ကိုလည်း ချန်ထားခဲ့လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ၊ မြန်မာ ထမင်းဆိုင်တွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ တစ်ခုပဲဟာ..၊
ဆိုင်ထဲမှာ ရေအင်တုံရယ်၊ ကျောက်ပြင်ရယ်၊ သနပ်ခါးတုံးရယ် ချိတ်ဆွဲ ပြထားတယ်၊ နိုင်ငံခြားသား တွေလည်း အမြဲလိုလို လာစားကြတော့ မြန်မာ့သနပ်ခါးကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ စိတ်ကူးကောင်း ပါပဲ၊ ဝန်ထမ်းလေးတွေ အားလုံးလိုလို ကလည်း သနပ်ခါးလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့..၊ သားက အဲဒါကို စိတ်ဝင်စား သွားတယ်၊ အမှန်တော့ ကျောက်ပြင်နဲ့ သနပ်ခါးတုံးကို သူသိပါတယ်၊ အိမ်မှာ သူ့အတွက် ကျနော်ဝယ်ထားပေး ပေမယ့် တခါမှ မလိမ်းဖြစ် သေးဘူး၊ အခု ဒီမှာ အားလုံးက သနပ်ခါးနဲ့ ဆိုတော့ သူလည်း လိမ်းချင်တယ် ဖြစ်သွားရော...၊
ဝန်ထမ်းညီလေးက ဝမ်းသာအားရနဲ့ သွေးပေးပါတယ်၊ ပြီးတော့ ရော့..လိမ်း ဆိုတော့ သားက မလိမ်းတတ်တာနဲ့ ကျနော်ကပဲ အဲဒီ ညီလေးကို နည်းနည်းလောက် လိမ်းပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းလိုက်ရတယ်၊
သနပ်ခါး မခြောက်တခြောက်မှာ သူ့မျက်နှာ နည်းနည်းတင်းလာလို့ မနေတတ်ဘူး ဖြစ်နေတာ..၊ ဒါပေမယ့် ခဏလည်း ကြာရော ပူပြင်းတဲ့ ရန်ကုန်နေ အောက်မှာ သူ့မျက်နှာက အေးနေတာကို သူ့ဟာသူ သဘောကျလို့ မဆုံးဘူး ဖြစ်နေခဲ့တယ်..၊
ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ၅ ရက်လောက်နေမှ မြို့ထဲဖက်ကို ရောက်ဖြစ်တော့တယ်၊ မြို့ထဲကို ပထမဦးဆုံး ဆူးလေဘုရားလမ်း တလျှောက် ဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ ရင်ဘတ်ထဲ အမျိုးအမည် ခွဲခြားရ ခက်တဲ့ ခံစားမှုလေးတခု ဖြတ်ပြေးသွားတယ်၊ တကယ့်ကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး...၊
ရန်ကုန် ရောက်နေတာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ ရက်လောက် ကတည်းကပဲ၊ ဒါပေမယ့် အခုမှ သူ့ရဲ့ နှလုံးသား ဗဟိုတည့်တည့်ကို ရောက်လာခဲ့တာ..၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ ကိုယ်နဲ့ ကျောင်းမှာ နှစ်စ ကတည်းက တခန်းတည်း အတူတူတက်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို မြင်နေ၊ သိနေ ပေမယ့် တကယ်တမ်း ချစ်သူ ဖြစ်တော့မှ သူ့အနားမှာ ပထမဦးဆုံး ကပ်ထိုင်တဲ့အခါ ရလိုက်တဲ့ ရင်ခုန်မှု မျိုးပေါ့..၊ ချစ်သောရန်ကုန်.. မင်းဘေးမှာ ကိုယ် ရောက်နေခဲ့ပြီ..၊
တစ်ရက်မှာတော့ အင်းယားလမ်းထဲက Happy မှာ သွားစားဖြစ်တယ်၊ ဒါကိုတော့ ကျနော် အရင်က မကြားဖူးဘူး၊ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ခေါ်သွားတာနဲ့ ရောက်သွားတာ..၊ ခေမရဌ်ရဲ့ အနောက်မှာ ရှိပါတယ်၊ ရှမ်းစာ၊ ကချင်စာ စတဲ့ ရိုးရာစာတွေ အဓိက ရောင်းတယ်၊ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားသလိုပဲ၊ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အများကြီး ရပါတယ်၊
ဒါက ဂဏန်းပျော့ကြော်.. (လာပြန်ပြီ ဒီဂဏန်းပျော့)၊ ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ဂဏန်းပျော့က ဆိုင်တိုင်း လိုလိုမှာ ခလုတ်တိုက်တယ်၊ ဂဏန်းပျော့ စားတာများလို့ အပြန် လေယာဉ်ပေါ် အိမ်သာ ထ,အသွားမှာ ဘေးတိုက် လျှောက်နေမိတယ်၊ ပထမ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လန့်သွားတယ်၊ သေချာပြီ၊ ဒါ ဂဏန်းစားလို့ ဘေးတိုက် လျှောက်နေမိပြီပေါ့၊ နောက်မှ စိတ်နဲ့ကိုယ် အသာလေး ပြန်ကပ်ပြီး သတိထား ကြည့်မှ ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ လေယာဉ်မယ်တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဖြတ်နေလို့ သူတို့နဲ့ မတိုက်မိအောင် ကိုယ်ကို တစောင်းလှည့်ပြီး လျှောက်နေရတာ..၊ ဟူး.. လူကို ထူပူသွား တာပဲ..၊း)
ဒါက ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (လို့ ထင်တာပဲ)၊ သိပ်တော့ မမှတ်မိ တော့ဘူး၊ ခေါက်ဆွဲ အထူးပြုဆိုင် မှာစားလို့ ခေါက်ဆွဲ ဆိုတာတော့ သေချာတယ်၊
အင်း..ဒါလည်း မေ့တေ့တေ့ပဲ၊ ကြာဇံနဲ့ ဝက်သားနဲ့ ဘာဆိုလား...၊ ကျနော့်မလဲ မမှတ်မိတာတွေ၊ ထင်တာပဲတွေ၊ မေ့တေ့တေ့တွေ များနေတယ်၊ ဒါတောင် ငါးတွေ စားထားသေးတာ နော်..၊း)
အဲ.. ဒါတော့ မှတ်မိတယ်၊ ယိုးဒယား ငါးပိ ထမင်းကြော်..၊ ရက်စ်..၊ ကြိုက်လို့ ၂ ခါ ထပ်စားတယ်၊ ပြီးတော့ အက်စ်ပရက်ဆို ဒပ်ဘယ်လ် ရှော့ သောက်ပလိုက်တယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ယိုးဒယား ထမင်းကြော် စားပြီး အီတာလျံ ကော်ဖီသောက်တယ်၊ ဒါမှ ဂလိုဘယ်လိုက် မဇေးရှင်း သေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်ဟာကများ ရှင်းဦးမှာလဲ... ကဲ..၊
အာရ်စီတူး နားကနေ ဖြတ်တော့ ဘာရယ်မဟုတ် လွမ်းသွားပြန်ရော..၊ ဒါတောင် ကျနော်က တစ်နှစ်ပဲ တက်ခဲ့တာပါ၊ အသွင်အပြင်တွေ ပြောင်းသွားပေမယ့် တက္ကသိုလ်ရဲ့ အငွေ့အသက် တွေက နှစ်တွေ အကြာကြီးကို စွဲနေဦးမယ် ထင်ပါရဲ့...၊
ပြောကြစတမ်း ဆိုရင် သူက ငယ်ချစ်ဦးပါ၊ အခု စန်းပွင့်နေတဲ့ 'ကျား' တို့၊ 'ကရဝိတ်' တို့ ဘယ်သူမှ မရှိသေးခင်မှာ ရင်ကိုအေးမြ စေခဲ့သူ...၊ အလှမ်းမဝေးတဲ့ မန္တလေး...၊ ငယ်သံယောဇဉ် ကြောင့်မို့ ကျနော် သူနဲ့ပြန်ဆုံ ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ ပြောင်း - လဲ - သွား - ခဲ့ - ပြီ..၊
"နေဝင်ချိန်တွေကို ငါတစ်ယောက်တည်း မက်မက်စက်စက် ထိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်..."
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီဓါတ်ပုံကို ခေါင်းစဉ် ပေးချင်လာလို့...၊း) တကယ်တော့ ဒီနေဝင်ချိန် ဓါတ်ပုံက ဘာမှ မဟုတ်သေး ပါဘူး၊ ရှေ့လာမယ့် ပို့စ်မှာ နေဝင်ချိန်တွေ၊ နေထွက်ချိန်တွေ အရမ်းလှတဲ့ နေရာတစ်ခုကို သွားကြရအောင်..၊ ဟုတ်ပါတယ်..၊ ပုဂံပါ..၊ ရှေ့လာမယ့် ပို့စ်မှာ ကျနော်နဲ့အတူ ပုဂံကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...။ ။
၂၇ မတ်၊ ၂၀၁၂
Posted by ညီလင်းသစ် au 27.3.12 47 comments
လမ်းမှာတုန်းက ကျနော်စဉ်းစားထား တာက ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို လေယာဉ် ဆိုက်တဲ့အခါ လေယာဉ်ပြူတင်း ကနေ ဓါတ်ပုံလေး တစ်ပုံ၊ နှစ်ပုံလောက် ရိုက်မယ်လို့...၊ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူလေဆိပ်က စ,ထွက်ကတည်းက သားကလေးက အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ရန်ကုန်လေဆိပ် ရောက်တာလည်း မနိုးသေးဘူး၊ ကျနော့် ပေါင်ပေါ်မှာ အဆန့်သားကို မလှုပ်မယှက်နဲ့..၊ ဒါနဲ့ပဲ ဓါတ်ပုံကိစ္စကို လက်လျှော့လိုက်ရ တော့တယ်၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရှိသမျှ လူတွေ အကုန်ဆင်းသွား ပြီးမှ ကျနော်တို့ ဆင်းတယ်၊ သားကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းဖို့ ဘယ်လိုမှ နှိုးလို့မရတာနဲ့ ကျနော်တို့ တစ်ယောက်တလှည့်စီ ချီလာရတယ်၊ လေဆိပ်ထဲက လဝက ကောင်တာမှာ တိုးရစ်စ်တွေ အများကြီး တန်းစီနေတာ တွေ့တယ်၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ တိုးရစ်စ်တွေ ဒီလောက်များတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး၊ ကျနော်တို့ မတိုင်ခင် တခြား လေယာဉ်တစ်စင်းလည်း ဆိုက်ထားတော့ ခရီးသည်တွေ ဆိုတာ လေဆိပ်မှာ ပျားပန်းခပ်ပဲ၊
လေဆိပ်အသစ်က ဖွင့်ကာစတုန်းက အရင်အဟောင်းနဲ့ ယှဉ်တော့ ကြီးသလိုလို ထင်ရတယ်၊ အခုတော့ လေယာဉ်လေး ၂ စင်းက ခရီးသည်တွေနဲ့တင် ပြည့်လုလုပဲ..၊ စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စတွေအားလုံး အဆင်ပြေ ပါတယ်၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အရာရှိတွေလည်း ပြောဆို၊ ဆက်ဆံတာ တကယ့်ကို ချိုချိုသာသာနဲ့..၊ ဒီတခါတော့ မြန်မာခရီးသည်တွေလည်း တိုးရစ်စ်တွေလိုပဲ ကောင်တာရှေ့မှာ တားထားတဲ့ လိုင်းအနောက်မှာ စည်းကမ်း ရှိရှိ ရပ်စောင့်ပြီး တစ်ယောက်ပြီးမှ တစ်ယောက် ကောင်တာကို သွားကြတာ သတိပြုမိတယ်၊ အရင်တုန်းကလို ပြုံပြီး တိုးနေတာမျိုး မရှိတော့ဘူး၊ ဒီလို အခြေအနေတွေ မြင်ရတာ တကယ်ပဲ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်၊ ကျနော်တို့ကို အဖေနဲ့အမေ လာကြိုကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့ မြေးကလေး ကတော့ အဖိုးနဲ့အဖွားကို ထ,မကြည့်နိုင်ဘူး၊ ကျနော့် ပုခုံးပေါ်မှာ တရှူးရှူးနဲ့ အိပ်မောကျတုန်း..၊ ရန်ကုန်ရဲ့ လေနွေးနွေးတွေဟာ လေဆိပ်တံခါးက ထွက်ထွက်ခြင်းမှာပဲ တကိုယ်လုံးကို ပက်ဖြန်း၊ ပုတ်နှိုးလိုက်တယ်၊ ဒါဟာ ကျနော်သိတဲ့ ရန်ကုန်မှ ရန်ကုန်အစစ် ပါပဲ..၊ အခုတော့ ကျနော့် တကိုယ်လုံးလည်း ပူနွေးလို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကို ရောက်နေခဲ့ ပြီပေါ့...၊
ကျနော်တို့ အင်းယားလိတ် ဟိုတယ်မှာ တည်းဖြစ်ပါတယ်၊ မနှစ်က ဇူလိုင်လ ကတည်းက ကြိုပြီး အခန်းဘွတ်ကင် လုပ်ထားခဲ့လို့သာ အဆင်ပြေတာလို့ ပြောရမှာပါပဲ၊ ကျနော်တို့ ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ဟိုတယ်က ရှိသမျှ အခန်းတွေ အကုန်ပြည့်နေပြီလို့ သိရတယ်၊
နောက်တစ်နေ့ မနက် ၆ နာရီ လောက်မှာ ကျနော် နိုးလာခဲ့တယ်၊ တကယ်ဆို jet lag နဲ့ဘာနဲ့ နေမြင့်မှ နိုးသင့်ပေမယ့် အဲဒီမနက်ကတော့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းကို နိုးလာတယ်၊ ဒါနဲ့ ဝရန်တာကို ထွက်ပြီး ငှက်ကလေးတွေ သီချင်းဆိုသံကို နားထောင်နေ မိတယ်..၊
ဝရန်တာကနေ မြင်ရသမျှ သစ်ပင်တွေ၊ ဝါးပင်တွေကို လိုက်ငေးရင်း သဘာဝ တရားထဲမှာ လုံးဝကို နှစ်မြုပ်၊ ပျော်ဝင် ပစ်လိုက်တယ်၊ မနက် ၆ နာရီရဲ့ အပူချိန်ဟာ မပူ၊ မအေးနဲ့ တကယ့်ကို နေလို့ကောင်းရုံ ပါပဲ၊ တဖက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ dining room...၊
မနက်စောစော ဖွင့်ကာစမို့ ထင်တယ်၊ လူရှင်းနေ သေးတယ်၊ ဒီလို သာယာတဲ့ မနက်ခင်း တစ်ခုကို အခုလို ဝရန်တာလေး ပေါ်ကနေပဲ မြင်ကွင်း အကန့်အသတ်နဲ့ ကုန်ဆုံးပစ်လိုက် ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် နှမြောစရာ ကောင်းလိုက်မလဲ၊ အဲဒီလို အတွေးဝင်လာလို့ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်၊ ညဝတ် အင်္ကျီလဲ၊ ခပ်မြန်မြန် သွားတိုက်ပြီး ကင်မရာဆွဲလို့ အောက်ဖက် ဆင်းလာလိုက်တယ်၊ ကျနော် ဟိုတယ်အပြင်ဖက် အရောက်မှာပဲ နေထွက်လာတာနဲ့ ကြုံလိုက်တယ်...၊
သိပ်တော့ မလှပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ရန်ကုန်က ကျနော့်ကို ပေးခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး sunrise ပဲ မဟုတ်လား၊ အုန်းလက်ကြားကနေ ရနိုင်သလောက်လေး ကျနော်ခံစား ခဲ့တယ်..၊ ခဏကြာမှ ဟိုတယ်တစ်ပတ် လမ်းလျှောက် ပါတယ်၊
အင်းယားရေပြင်ကတော့ အအိပ်မက်တဲ့ မိန်းမပျို တစ်ယောက်လို လှလှပပနဲ့ အိပ်မောကျနေတုန်း ပါပဲ၊ သူနိုးသွားမှာ စိုးတာနဲ့ ကျနော်လည်း သူ့ဘေးကနေ ခြေသံဖွဖွနဲ့ပဲ အသာလျှောက်ခဲ့တယ်၊ ကန်တွေရဲ့ ရေပြင်ငြိမ် အလှဟာ သဘောကျစရာ ကောင်းပါတယ်၊
ဒီလိုမျိုး အုန်းပင်တွေ၊ ထန်းပင်တွေကို အစီအရီ မမြင်ရတာ ကြာပါပြီ၊ ကျနော် ထိုင်ငေးနေ မိတယ်၊ မနက်ခင်းဟာ မြူပုဝါပါးလေး ခြုံသိုင်းလို့ စင်စင်ကြယ်ကြယ်နဲ့ လှလိုက်တာ...၊
အတော်လေးကြာမှ အခန်းထဲကို ပြန်တက်လာ ခဲ့တယ်၊ ဟိုသားအမိက အဲဒီတော့မှ လူးလူးလွန့်လွန့်နဲ့ ခပ်ဖြေးဖြေး နိုးလာကြတယ်၊ သူတို့ အဆင်သင့် ဖြစ်တော့ ကျနော်တို့ မနက်စာ သွားစားကြ ပါတယ်၊
ဒါ ရန်ကုန်မှာ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မနက်စာရဲ့ ပထမဦးဆုံး ခွက်ပါပဲ၊ သေချာတာ ပေါ့ဗျာ၊ မုန့်ဟင်းခါးက လွဲလို့ ဘာများ ဖြစ်နိုင်ဦးမှာလဲ..၊ အင်းယားလိတ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို မနက်စာ အတွက် တနေ့တမျိုး ချက်ပါတယ်၊ အဲဒီနေ့က မသိလို့ အဲဒီလို ပန်းကန်လုံးလေးနဲ့ စားခဲ့ရတာ..၊ နောက်နေ့မှာတော့ မရတော့ဘူး၊ မုန့်ဟင်းခါး စားတိုင်း ဟင်းချိုသောက်တဲ့ ပန်းကန်လုံး ခပ်ကြီးကြီးကို တောင်းပြီး ထည့်စား တော့တယ်၊ ဘာရမလဲ..၊ လူကိုများ တိုးရစ်စ် အောက်မေ့လို့...၊း)
မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ အပြင် အခုလို ဆန်ပြုတ်လည်း ရပါတယ်၊ သိပ်တော့ မကြိုက်ဘူး၊ ကျနော်က အာရှ အစားအစာ မြင်သမျှ စားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့မို့ မြည်းကြည့်တာ၊ နောက်ရက်တွေမှာ မစားတော့ဘူး၊ ကျန်တာကတော့ ဟိုတယ်တွေထုံးစံ international breakfast ပါပဲ..၊ တကူးတက စာမဖွဲ့လောက် ပါဘူး၊
မိဘတွေအိမ် သွားရင်းနဲ့ သားက လမ်းမှာ ဆိုက်ကားတွေ တွေ့သွားတယ်၊ သူ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး၊ ဘယ်လို ခေါ်မှန်းလဲ မသိဘူး၊ သူသိတာက စက်ဘီးအနောက်မှာ တပ်ပြီး ဆွဲရတဲ့ သူစီးနေကျ လှည်းကလေး..၊ ဆိုက်ကားကို သူ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ကျနော်လည်း ပေးစီးလိုက်တယ်..၊
သူတို့ မြေးအဖိုးနှစ်ယောက် ဆိုက်ကားတစ်စီး ငှားပြီး ရွာရိုးကိုးပေါက် လျှောက်စီးကြတယ်..၊ Sightseeing by trishaw ပေါ့လေ...၊း)
ဒါကတော့ အမေ့လက်ရာ နေ့လယ်စာပါ၊ ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊ မေတ္တာဟာ အလျားအနံ မရှိဘူး၊ ဘာညာ ပြောကြပေမယ့် အရသာတော့ ရှိမယ်ထင်တယ်၊ အမေ့မေတ္တာ ထည့်ချက်တဲ့အခါ လူစားတဲ့ ဟင်းပေမယ့် နတ်သုဒ္ဓါ ဖြစ်,ဖြစ်သွား တတ်တယ်၊ သားသမီးတွေ အဖို့ အသက်တွေ ကြီးလာလေလေ၊ အမေတွေရဲ့ လက်ရာဟာ ပိုပြီး အရသာ ရှိလေ လေပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ...၊
ညနေပိုင်းမှာတော့ ရွှေဂုံတိုင် မီးပွိုင့်အလွန်က 'ရွှေကောင်း' မှာ ဟော့ပေါ့တ် သွားစားကြတယ်၊ အရင်တုန်းက ကျနော်သိတဲ့ ဟော့ပေါ့တ်က Summit Parkview ဟိုတယ်က ကိုကာဆူကီ ဟော့ပေါ့တ်ပါ၊ အခုတော့ ဒီလိုမျိုး ဟော့ပေါ့တ်ဆိုင်တွေ အတော်များလာတာ သတိထား မိတယ်၊
တစ်အိုးထဲမှာပဲ အစပ်နဲ့ အချိုကို တဝက်စီ ထည့်လို့ရအောင် လုပ်ထားတယ်၊ ဟင်းရည်က ကြက်သားဟင်းရည်ပါ၊ အရည်ထဲ ထည့်ဖို့ ဟင်းတွေကတော့ အတော်လေး စုံပါတယ်၊ အသားစုံ၊ အရွက်စုံ အပြင် ပင်လယ်စာတွေပါ ရတယ်၊ ပန်းကန်ပြားလေး တွေထဲမှာထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားတယ်၊ ဈေးက တစ်ပန်းကန် ၄၀၀ လောက်ကနေ ၁၂၀၀ လောက်အထိ ရှိပါတယ်၊ တစ်ပန်းကန် ၄၀၀ ဆိုတာ မများဘူး ထင်ရပေမယ့် ဘာမှ သိပ်မပါ ပါဘူး၊ ဒီတော့ ပန်းကန်တွေ ခပ်များများမှာဖို့ လိုပါတယ်၊ ဆိုတော့ ဝိုင်းရှင်းတဲ့ အခါ ကျသင့်ငွေလည်း မြင့်ပြီပေါ့၊
ကျနော်တို့ ၂ ခါ သွားစားဖြစ် ပါတယ်၊ ပထမ တခါက ၅ ယောက်ဝိုင်း..၊ ငါးသောင်း ကျပါတယ်၊ ဒုတိယ တခါက ၇ ယောက်ဝိုင်း..၊ ခြောက်သောင်း ကျတယ်၊ လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆို ဒေါ်လာ ၆၀ နဲ့ ၇၅ ဒေါ်လာလောက် ရှိပါတယ်၊ ဒါကို တွက်ကြည့်ပြီး မအိမ်သူက မျက်လုံးပြူး သွားတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ လူတွေက ၂ နာရီလောက် အတွင်း ငွေဒီလောက် သုံးနေကြ ပြီလားလို့ မေးတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်.. သူနေခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းကနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ လန့်မယ်ဆိုလည်း လန့်လောက်စရာ ပေါ့လေ၊ ဒါပေမယ့် သူကသာ လန့်နေတာ...၊ အဲဒီ ဆိုင်အကြီးကြီး ထဲမှာ စားပွဲတိုင်းလိုလို လူကအပြည့်...၊
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆိုင်းဘုတ်ကို သဘောကျလို့ ရိုက်လာတာ..၊ 'ရွှေကောင်း' ကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ထားတာ မမိုက်ဘူးလား...၊း)
နောက်တစ်နေ့ မှာတော့ My Garden မှာ သွားစား ဖြစ်ပါတယ်၊ အမှန်တော့ ကျနော်တို့လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို ဆိုင်တွေ ရောက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုက သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် လာဖိတ်ကြတာနဲ့ ဟိုဆိုင်၊ ဒီဆိုင် နည်းနည်း ရောက်ဖြစ်တဲ့ သဘောပါ..၊ My Garden ကတော့ Mon Petit Avatar ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ ဖတ်ရ ကတည်းက သွားကြည့်ချင် နေတာဆိုတော့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ Summit Parkview ရဲ့ အရှေ့မှာ ရှိပါတယ်၊ ဆိုင်က အတော်လေး ကျယ်တယ်၊ စားပွဲတွေ၊ ထိုင်ခုံတွေကို သေသေချာချာ လုပ်ထားတယ်၊ ပူပြင်းတဲ့ နေ့လယ်ခင်း တွေမှာ အေးအေးလူလူ ထိုင်လို့ ကောင်းပါတယ်၊ ညဖက်တွေဆို အနောက်ဖက်မှာ unplugged ဖျော်ဖြေမှုလည်း ရှိတယ်၊ မြန်မာစာ၊ အနောက်တိုင်းစာ ရတယ်၊ အဲ.. ဈေးကတော့ နည်းနည်း များပါတယ်၊
ဂဏန်းပျော့ ဟင်းပါ၊ ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး ဆိုင်တွေမှာ အဲဒီ ဂဏန်းပျော့ရတာ သတိထား မိတယ်၊ အရင်ကတော့ ဂဏန်းပျော့ဆိုတာ တသက်နဲ့တကိုယ် မကြားဖူး ခဲ့ပေါင်ဗျာ..၊ စားလို့တော့ ကောင်းတယ်..၊
ပြည်ကြီးငါးသုပ် ကတော့ အတော်လေး စားကောင်းတယ်၊ ဘယ်ကလာတဲ့ ပြည်ကြီးငါးလဲတော့ မသိဘူး..၊း)
ဂဏန်းပျော့ဟင်း၊ ဆူကာရွက်ကြော်၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော်နဲ့ ပြည်ကြီးငါးသုပ် ပါပဲ..၊ အဲ.. ဖန်ခွက်ထဲက အဝါရောင် အရည်ကတော့ 'ကျား' တံဆိပ် ရေနွေးကြမ်းပါ..၊းP
ကဲ..ပုံတွေနဲ့ စာတွေကို ခပ်စိပ်စိပ်လေး ကြည့်ချင်၊ ဖတ်ချင်တယ် ဆိုလို့ တင်လိုက်ပါပြီဗျာ..၊ တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံ သဟဇာတ ဖြစ်၊ မဖြစ်လည်း မစစ်နိုင် တော့ဘူး၊ ခရီးစဉ်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ရက်စဉ်အတိုင်း ရေးဖို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် တခါတလေလည်း ဓါတ်ပုံတွေ အဆက်အစပ်ကို ဦးစားပေးပြီး တင်ဖြစ်တာ မျိုးလည်း ရှိ ပါမယ်..၊ ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား..၊း)
၂၁ မတ်၊ ၂၀၁၂
Posted by ညီလင်းသစ် au 21.3.12 42 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.3.12 30 comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ၊ ကျနော်မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ကနေ မနေ့က ပြန်ရောက်ပါတယ်၊ စုစုပေါင်း ၂၄ ရက် နေခဲ့တယ်၊ အားလုံး ချောချောမောမောပါပဲ..၊ ကြုံတွေ့မှတ်သား လာတာတွေ နဲ့အတူ ဓါတ်ပုံတွေလည်း အများကြီး ရိုက်လာခဲ့တယ်..၊ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှေ့လျှောက် ကျနော်တင်မယ့် ပို့စ်တွေဟာ ဘာအကြောင်းဖြစ်မလဲလို့ ခန့်မှန်းလို့ ရနေလောက်ပါပြီ...၊း)
ကျနော် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတုန်း Schedule နဲ့တင်ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ပို့စ်လေးမှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း၊ နှုတ်ခွန်းဆက်ကြတဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေ အားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေးကို အချိန်ရခိုက်လေးမှာ ပြန်ဝင်ကြည့်တုန်း ခပ်နှေးနှေးကွန်နက်ရှင်ရဲ့ အဆုံးမှာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်လာတဲ့ အဲဒီကွန်မန့်လေးတွေဟာ တကယ့်ကိုပဲ ကြည်နူးစရာပါ၊ ၃၇ ဒီဂရီဆိုတဲ့ အပူချိန်ကိုတောင် မေ့သွားစေလောက်အောင် အေးမြတယ်ဆိုရင် ပိုတယ်လို့ မယူဆ စေချင်ပါဘူး..၊
ဒီနေ့ပဲ အလုပ်ပြန်ဝင်တာမို့ လာမယ့်ရက်တွေမှာ ဓါတ်ပုံတွေကို စီစဉ်ပြီးတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း တင်သွားဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်၊ ဒီပို့စ်လေးနဲ့အတူ ခဏတာ ဝေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးသူ၊ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ အားလုံးကို ပြန်လည် နှုတ်ဆက်ပါတယ်...။
၁၄ မတ်၊ ၂၀၁၂
Posted by ညီလင်းသစ် au 14.3.12 30 comments
Cara jualan online shop gratis/tanpa modal dengan efektif - Apakah saat ini anda bingung masalah pemasaran produk anda? Jika iya, pasti anda akan bertanya “bagaimana cara memasarkan produk dengan maksimal? Atau baga...